Iinkcubeko ezininzi -Chengdu Dacheng Energy eNtsha yeTechenology Co.
Yintoni esenza sinyanzelise ekuqokeleleni, ekuvuseleleni nasekuphuhliseni ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava omkhosi kwizixhobo zokutshaja kunye netekhnoloji yebhetri yebandla yebhetri? Ukusuka kuphando kunye nophuhliso, uyilo, imveliso, izinto ezintsha kwintengiso yehlabathi. Qhubeka ekufuneni impumelelo yomsebenzi kunye nendlela yokuphila, kwaye wenze konke okusemandleni.
Yenza indawo yokusebenza esebenzayo nefanelekileyo, yenza abasebenzi bazive bekhululekile, bezele luthando kunye nothando lokusebenza. Yenza izinto ezinesimo sengqondo esifanelekileyo, wonwabele umsebenzi, ufumane uluvo lokufezekisa, kwaye wazi ixabiso lakho.
Ukuqina okuzinzileyo, ukusebenzisana ngokuphumelela
Ukuqina okuzinzileyo, ukuphumelela intsebenzo yokuphumelela iDacheng New Energy Technology Co, Ltd. ikhokelwa ngumbono wophuhliso lwenzululwazi, iqulunqa izicwangciso zophuhliso, kwaye iyenze isebenze ngokungqinelana ngqo neemeko zenkampani. Ukukhuthaza ngokuzolileyo uphuhliso ekunxibelelaniseni ukukhula kwezoqoqosho, kwezentlalo nakwezabasebenzi;
Uqoqosho lwentengiso ayisiyiyo kuphela ukhuphiswano loqoqosho, kodwa ikwayiyo intsebenziswano kunye noqoqosho lwentsebenziswano. Ukhuphiswano alunakuphepheka, kodwa intsebenziswano kunye nemanyano yimikhwa yophuhliso lwexesha elizayo.
Isalathiso sexesha elizayo sokwenza iimoto luphuhliso oluhlaza. Kwimeko yemizi-mveliso yamandla emoto emitsha, ibonakalise amathuba ophuhliso amakhulu, kwaye iye yaba yinto entsha kwisantya esiphakathi nesezantsi, isantya esiphezulu kunye nokuhamba umgama omfutshane.Ukuhamba kancinci uyakuqonda ukukhululeka komzimba wemoto, umbane Kwinkqubo yamandla kunye nokukhuthaza ukuguqulwa kobume beshishini leemoto, eliye laxatyiswa ngamazwe kwihlabathi liphela. Sibonelela ngezinto ezingundoqo kwizithuthi zombane ukufezekisa "ukusebenza ngokukuko, ukukhuselwa kwendalo kunye nokonga umbane".